माल्टाबाट पर्यटक पठाउन तीव्र पहल | We Nepali
२०७६ माघ ३ गते १३:४६
लन्डन । युरोपको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य माल्टामा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ शुभारम्भ गरिएको छ । बेलायत तथा माल्टाका लागि नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
नेपाली दूतावास लन्डनको आयोजना र गैरआवासीय नेपाली संघ माल्टा, नेपाल टुरिजम बोर्ड, स्थानीय नेपाली संघसंस्थाको समन्वयमा ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ को औपचारिक उद्घाटन गरियो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन राजदूत डा. सुवेदी, दूतावासका द्वितिय सचिव लव सुवेदी त्यहां पुगेका थिए । त्यस्तै नेपाल भ्रमण वर्षको उद्घाटन समारोहमा स्थानीय मेयर, काउन्सिलर तथा नेपाली संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति थियो ।
राजदूत सुवेदीले माल्टावासीहरुलाई नेपाल भ्रमण गर्न आग्रह गर्दै आफू काम गर्ने प्रत्यक ठाउंबाट कम्तिमा एकजना साथी नेपाल जान प्रेरित गर्न आग्रह गरे । माल्टामा सम्पन्न यस कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रिय सल्लाहकार तथा एनआरएनए आइसीसी ‘भिजिट नेपाल २०२० विशेष टाक्सफोर्स’ का अन्तर्राष्ट्रिय मोडरेटर सोम सापकोटाले बताए ।
माल्टास्थित मजाइडाकी मेयर मार्गरेट बाल्डाचिनो सिफाइले ‘होलिडे’ का लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको जनाउंदै सबैलाई नेपाल भ्रमण गर्न अनुरोध गरिन् ।
सो अवसरमा माल्टाबाट सगरमाथा आरोहण गर्ने तारमोनाले सगरमाथा चढ्दाको अनुभव बताएका थिए ।
माल्टामा प्रचार प्रसार तीव्र तुल्याउन स्थानीय यातायातका साधनहरुमा विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथाको तस्विर, शान्तिका प्रतिक बुद्धको प्रतिमा लगायत विभिन्न पोष्टरहरु राखिएको छ ।
उता, नेपाली दूतावासको टोलीले माल्टा लगायत विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोग प्रमुखसंग पनि भेटघाट गरेको थियो । भेटमा विदेशी पाहुनालाई ’टोकन अफ लभ’ प्रदान गरि नेपाली दूतावास लन्डनका तर्फबाट ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को लोगो अंकित टोपी वितरण समेत गरियो ।
नेपाल सरकारको २० लाख पर्यटक नेपाल भित्रयाउने लक्ष्य सफल बनाउन विदेशमा समेत ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ अभियान तीव्र भइरहेको छ ।
तस्बिरहरु- रहरमान तामाङ